FITSABOANA COVID-19 AO TOAMASINA : Voakiana mafy ny ao amin’ny Hopitaly manarapenitra
Feno taraina amin’ny mpanao gazety manoloana ny fiparitahan’ny valanaretina sy ny fomba fandraisana marary ao amin’ny hopitaly manara-penitra CHU-Morafeno- Toamasina ny mpanaraka marary sy ny fianakavian’ny manaman-jo namoy ny ainy ao amin’ ity hopitalim-panjakana lehibe ao Toamasina ity. 1er avril 2021
Betsaka rahateo ny natrehi-maso tao an-toerana nandritra ny fanaovana fanadihadiana ny alatsinainy teo. Amin’ny ankapobeany aloha dia tsy voahaja amin’ny tokony ho izy ny zon’ny marary miainga avy amin’ny sampana vonjy taitra izany ka hatrany amin’ny fahazoan’ ilay marary efitrano ifanaraka amin’ny aretina hidirany hpitaly.
Raha ny ao amin’ny Chu-Morafeno aloha dia raisina ao amin’ny "salle de déchocage" ny marary mialoha ny hanasokajiana ny aretina, ka hanomezana azy efitrano mifanaraka amin’ izany. Izay tsy tokony haharitra andro iray izany. Mifanohitra amin’ izay ny zava-misy raha oharina amin’ ity marary iray niditra ny zoma maraina noho ny aretim-bavony izay manoy ny ainy, ny alatsinainy 22 marsa tamin’ny 10 ora.
Fa tsy nisy fikarakarana ny razana ary tsy neken’ny tompon’ andrakitry ny hopitaly raisin’ny fianakaviana an-tanana ny razana efa aty amin’ny 3 ora tolakandro vao nandray an-tanana ny razana ny mpiasan’ny hopitaly ary nitaky vola tamin’ny fianakaviana. Teto dia nambaran’ ireto fianakaviana manaman-jo ireto fa fampifangaroana ny marary samy manana ny aretiny anisan’ny olana. Nisy ihany koa fahadisoana fanafody nomena ny marary. Anisany mahasimba ny saina aman’eritreritra marary hafa ny hampifangaroana azy ireo amin’ny mararin’ny Covid-19", raha ny nambaran’ ireto fianakavina ireto hatrany.
Hanjakan’ny kolikoly hatrany amin’ny fasana kominaly
Manomboka eo amin’ny fikarakarana ny razana dia efa misy endrika kolikoly sedrain’ny fianakaviana mana-manjo amin’ny hopitaly ao Toamasina ary hatreny am-pandevenana izany. Amin’ izay resaka fahafatesana. Ny datin’ny 13 ka hatramin’ny 21 marsa teo dia nahatratra hatramin’ny 71 be izao ny olona namoy ny ainy, ka ny 44 tamin’ ireo dia olona maty ho azy tsy tonga teny anivon’ny hopitaly. Iray mpiasa avy any Antalaha maty tao anaty sambo ity farany efa nalefa any Andranomanelatra ny razana.
Amin’ ireo olona 71 matyireo dia ny 30 maty teo anivon’ny hopitaly. Ny 44 tamin’ ireo 71 namoy ny ainy tao anatin’ny herinandro io dia lehilahy avokoa raha 27 kosa ny vehivavy. Mampikaikaika ny mponin’ i Toamasina ny fandoavam-bola mihoa-pampana ao amin’ny fasana kaominaly.
Mametraka ahiahy sy fahamailoana tanteraka ireo olom-pirenena FANOMEZANA ZOM-PIRENENA HO AN’NY VAHINY (2617) 8 juin 2021 Hamaritra ny ho avin’ny mpanazatra vaovao ny lalao hatrehan’ny Barea manaraka FAMPIVONDRONANA (114) 8 juin 2021 Mponina an-jatony eny Antanandrano tandindomin-doza OLANA AMINA TANY MIREFY 30 HA (112) 8 juin 2021 ALAKAMISY 3 JONA - ALAROBIA 9 JONA 2021 (105) 8 juin 2021 Tena fanoitra amin’ny fampandrosoana saingy be sakantsakana SEHA-PIHARIANA VOLAMENA (103) 8 juin 2021